गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » पूर्व मिस युनिभर्सलाई यो ड्रेसमा कि माथि छोप्नुस् नत्र विमान चढ्ने अनुमति दिइन्न भनेपछि जे गरिन् !
काठमाडौं । सन् २०१३ कि मिस युनिभर्स ओलिभिया कुल्पोले बिहीबार एक अनौठो कुरा भोग्नुपर्यो ।
जब उनलाई उनको पोशाकको कारण अमेरिकन एयरलाइन्सको विमानमा चढ्नबाट रोकियो, उनी हैरान भइन् । पूर्व मिस युनिभर्स तथा मोडल ओलिभियाले यसबारेमा जानकारी दिएपछि सबै चकित भएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकन एयरलाइन्सले आफूमाथि गरेको व्यवहारबारे उनले जानकारी गराएकी छिन् । सन् २०१३ मा इन्डिया भ्रमणका क्रममा विवादमा आएकी ओलिभिया कल्पो फेरि एकपटक चर्चामा छिन् ।
वास्तवमा अमेरिकी एयरलाइन्सका कर्मचारीले ओलिभिया कल्पोको पोशाकमा आपत्ति जनाएका थिए । रिपोर्टका अनुसार मोडलले लगाएको क्रप टपलाई कभर गर्न भनिएको थियो ।
यससँगै पूर्व मिस युनिभर्सले यसो नगरेमा उनलाई उडानमा यात्रा गर्न नदिने भनेर पनि निर्देशन दिइयो । जानकारीका अनुसार मोडललाई मेक्सिकोको उडानमा यात्रा गर्नबाट रोकिएको थियो ।
ओलिभिया कल्पोले यो पूरा घटना आफ्नो इन्स्टाग्राममा भिडियोमार्फत सेयर गरेकी छिन् । पूर्व मिस युनिभर्स आफ्नी बहिनी अरोरा र प्रेमीसँग यात्रा गर्न लागेकी थिइन्।
त्यसपछि एयरलाइन्सका कर्मचारीले उनलाई रोकेका हुन् । उनले कालो क्रप टप, साइकल चलाउने शर्ट्स र मिल्दो लामो स्वेटर लगाएकी थिइन्, त्यसपछि अमेरिकी एयरलाइन्सका गेट एजेन्टले उनलाई माथि छोप्नको लागि केही लगाउन निर्देशन दिए ।
त्यसो नगरे बोर्डिङ गर्न नपाउने स्पष्ट पारियो । त्यसपछि उनकी बहिनी अरोरा कुलपोले आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा यो घटनाको भिडियो सेयर गरिन् । बहिनी अरोराले इन्स्टाग्राममा भिडियो शेयर गरेकी छिन्, जसमा उनले ओलिभिया र आफू काबो जान लागेको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनेकी छिन्, ‘उनको लुगा हेर्नुस्, उनी धेरै प्यारी देखिन्छिन् । के त्यो सहि होइन ? तैपनि, एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले उनलाई लगाएको लुगा ठिक नभएको भन्दै रोके ।’
यसै बीच, अरोराले अर्को यात्रु भेट्टाइन्, जो त्यस्तै पोशाकमा थिए । उनलाई पनि देखाएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ओलिभियाले पछि आफ्नो इन्स्टाग्राममा आफ्नी बहिनीलाई देखाइएको भिडियो सेयर गरिन् र सोधिन्, ‘यो पोशाक कसरी अपमानजनक देखिन्छ ?
म आफैं सोच्छु यो लुगा कति अनौठो छ ?’ यद्यपि, विमानमा चढ्नु अघि, ओलिभियाले हुडी लगाइन्, जुन उनका प्रेमीको थियो ।
सन् २०१३ मा मिस युनिभर्स बनेपछि ओलिभिया भारत भ्रमणमा आएकी थिइन्, भ्रमणमा उनले ताजमहलमा जुत्ताको प्रचार गरेपछि विवाद भएको थियो । उनले आफ्नो जुत्ताले भरिएको झोला ताजमहल परिसर भित्र लिएर गएपछि भारतीयहरु रिसाएका थिए ।